Imaaraadka Carabta Oo Mar Kale Ka Hadlay Mawqifkoodda Somaliland iyo Soomaaliya | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Imaaraadka Carabta Oo Mar Kale Ka Hadlay Mawqifkoodda Somaliland iyo Soomaaliya
Hargeysa (SDWO): Wasiirul dawlaha arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta Dr. Anwar Qarqaash, ayaa sheegay in Imaaraadka Carabtu aaminsanyahay Soomaaliya mid ah, wuxuuna sheegay in UAE ay awoodaan xaqna u leeyihiin inay taageeraan dadka reer Somaliland.
Wakaaladda Reuters, waxay warbixinteeda qayb ka mid ah ku waraysatay wasiirul dawlaha Arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Dr. Anwar Qarqaash, oo sheegay in taageerada ay u fidinayaan Somaliland iyo maamulada kale ee Soomaaliya aanay UAE uga jeedin in la kala qaybiyo Soomaaliya.
Wuxuu-na sheegay inaanu jirin khilaaf u dhexeeya UAE iyo dawladda Soomaaliya. “Siyaasaddayada ah in aanu aqoonsannahay Soomaaliya mid keliya ah, weli waa halkeedii..Laakiin, isla markaasna waxa aanu awoodnaa in aanu dadka Somaliland ka caawino mashaariicda bani’aadanimo iyo horumarineed.” Intaas ayay wakaaladu ku soo koobtay hadalka uu Dr. Anwar kaga hadlay arrinta Somaliland iyo Soomaaliya.
Warbixintan Reuters, waxa kale oo lagu soo qaatay waraysi uu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi siiyay wakaaladda Reuters, markii uu safarka ku tagay dalka Imaaraadka Carabta, wuxuuna Madaxweyne Biixi sheegay in Imaaraadka Carabtu Somaliland ka caawinayaan dhinacyada ammaanka iyo horumarka iyo la dagaalanka argagixisada.
Sidoo kale saldhiga ay UAE ka dhisanayso magaalada Berbera ayaa isna waxa Reuters u xaqiijiyay madaxweyne Biixi, waxaanay Reuters isku xidhay saldhiga milatari ee UAE ka dhisanayso Berbera iyo ciidamadooda tagay jasiirada Suqadara.